Lalàm-pifidianana : Hiverina an-dapa ireo depiote 73 -
AccueilSongandinaLalàm-pifidianana : Hiverina an-dapa ireo depiote 73
05/05/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy maintsy hiverenana hodinihina eny anivon’ireo parlemanta ilay lalàm-pifidianana taorian’ny fanapahana navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ( HCC) ny alakamisy teo. Nisy tamin’ireo andininy tao anatin’ilay lalàna mantsy no nambaran’ity andrim-panjakana ity fa tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana ka tokony asiam-panitsiana, ankoatra ireo efa nofoanan’izy ireo. Araka ny lalàna eto amin’ny firenena, dia mandeha any amin’ny Filoham-pirenena ity lalàna ity taorian’iny fanapahana navoakan’ny HCC iny. Anjaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina indray avy eo no mandray ny fanapahan-kevitra, na havoaka ho lalàna manan-kery avy hatrany izany, na haverina any amin’ny fahefana mpanatanteraka indray asiam-panitsiana. Ny governamanta avy eo no mandefa azy hodinihina, sy handraisana fanapahan-kevitra eny anivon’ireo parlemanta, dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Aorian’izay vao handalo eny anivon’ny HCC indray izany hanaovana fitsirihina, raha mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana na tsia.
Araka io lalan-jotran’ny famoahana lalàna io, dia mety hisy indray izany ny adihevitra vaovao hotanterahin’ireo parlemantera. Andrasana araka izany ny hiverenan’ireo solombavambahoaka miisa 73 eny amin’ny lapan’ny antenimieram-pirenena, hitondra ny hevitr’izy ireo sy ny vahoakany hampidirina ao anatin’ilay volavolan-dalàna vaovao. Efa novalian’ny HCC raha ny fangatahana nataon’izy ireo dia ny tsy haneken’ity andrim-panjakana ity ireo andininy tsy mifanaraka ny lalàm-panorenana. Ireto solombavambahoaka ireto, izay tsy nitsahatra ny nampihorohoro ireo mpikambana teo anivon’ny HCC tamin’ny alalan’ny fihetsiketsehana maro nandritra izay tapa-bolana izay. Anjaran’izy ireo indray izany izao no manaja ny teniny, dia ny fanomezana soso-kevitra izay efa nolazainy fa mahatsara ny fifidianana izay hotanterahina eto amin’ny firenena. Araka ny lalàna anefa dia eny anivon’ny andrim-panjakana iasany ihany izy ireo no afaka mitondra izany heviny izany. Izany hoe efa hiverina handray ny asany araka izany ireto solombavambahoaka ho an’ny fanovana ireto. Miainga amin’ny fiovan’ny tena tokoa mantsy ny fametrahana fiovana eny amin’ny fiarahamonina, ary mihitatra hatrany amin’ny firenena izany.
Mbola mitana ny sain’ny maro amin’izao fotoana ny ady atao amin’ny valanaretina pesta, ary mbola vaindohan-draharahan’ny fitondram-panjakana. Nifantohan’ny fotoam-bitan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny ady amin’io valanaretina, izay mpiseho isan-taona, ary efa nisy nandritra ny taona ...Tohiny